भित्री बस्त्रको छनौटमा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र पछुताउनु पर्ला – Dailny NpNews
भित्री बस्त्रको छनौटमा भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र पछुताउनु पर्ला
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०९, २०७८ समय: १०:३३:२३
काठमाडौँ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले भित्री बस्त्रको बारेमा संवेदनसिल हुनैपर्छ। भित्री बस्त्र छालामैत्री वा सहज हुनुपर्छ।
भित्री बस्त्रका लागि सुती नै सही हुनसक्छ । सुतीको भित्री बस्त्र लगाउँदा सिल्क वा सिन्थेटिकको जस्तो समस्या हुँदैन। सिल्क वा सिन्थेटिकमा हावा पस्दैन । यसले छालाको इन्फेक्सन हुनसक्छ । सिन्थेटिक कपडा नै किनेपनि भित्रको लाइनिङ सुतीकै हुनुपर्छ।
भित्री बस्त्र कुन साइजको लिने ? त्यो तपाईंको शरीरमा निर्भर गर्छ। कसैलाई ठूलो चाहिएला, कसैलाई मझौला, कसैलाई सानो। आफुलाई फिट हुने भित्री बस्त्र किन्नुपर्छ। यसको पेन्टी, ब्रा जेसुकै होस्, आफ्नो नाप अनुसार सही छ भने हिँडडुल गर्न सजिलो छ।
कस्तो रंगको भित्री बस्त्र ? यो प्रश्न हामीलाई अर्थहिन लाग्छ। तर, चिकित्सकहरु भन्छन् सेतो पेन्टी लगाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन्। रंगबिरंगी पेन्टी आकर्षक देखिएपनि सफा एवं सेतो रंगको भित्री बस्त्र नै राम्रो हुन्छ ।
कतै तपाईंको स्तन वरपर स–साना फोकाहरु त छैनन् रु यदि त्यस्तो समस्या छ भने त्यसको कारण तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको अत्याधिक कसिलो अथवा खुकुलो ब्रा हुन सक्छ । त्यसले गर्दा तपाईंलाई फंगल इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ ।
हिजोआज महिलाहरुमा स्तन क्यान्सर समस्या धेरै हुन थालेको छ । अत्यधिक कसीलो ब्रा लगाउनाले रक्त सञ्चार रोकिन्छ र स्तन क्यान्सरको कारण बन्छ । त्यसबाहेक ब्रेस्ट लिगामेन्ट क्षति हुने खतरा पनि बढ्छ।
केही महिलाहरुमा सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या पनि हुन्छ। त्यसको कारण गलत साइजको ब्रँ लगाउनु हो। गलत साइजको ब्रा लगाउनाले निस्सासिएको महसुस हुन सक्छ र शरीरमा रक्त प्रवाह कम हुन सक्छ।
गलत फिटिङ भएको ब्राले तपाईंको गर्दन र पछाडिको मांशपेशीहरुलाई सपोर्ट गर्दैन। जसले कांँधको पीडा बढ्छ र त्यसको सोझो असर तपाईंको टाउकोमा पर्छ।